वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप १८% बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home लगानी वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप १८% बढ्यो
वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप १८% बढ्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप १८ प्रतिशत बढेको छ । निक्षेपमा दिइएको आकर्षक ब्याजदरका कारण बैङ्कहरूको निक्षेप बढ्न टेवा पुगेको हो । गत आवमा रू. १८ खर्ब ३६ अर्ब रहेको वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेप चालू आवमा बढेर रू. २१ खर्ब ५८ अर्ब पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा कारोबारमा रहेका बैङ्कले प्रकाशित गरेको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार यस्तो देखिएको हो ।
लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भएका कारण बैङ्कहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर बढाएका थिए । सामान्य अवस्थामा अधिकतम ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म रहने निक्षेपको ब्याजदर बढेर १३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । निक्षेप एक प्रकारको सुरक्षित लगानी हो । सुरक्षित लगानीमा राम्रो प्रतिफल पाइने भएकाले निक्षेपकर्ता आकर्षित भएका हुन् । फलस्वरूप, गत आवको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा निक्षेप बढेको हो । गत आवको तुलनामा बैङ्क अफ काठमाडौंबाहेक बाँकी सबै वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप बढेको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा सबैभन्दा धेरै जनता बैङ्कले निक्षेप १ सय ७ दशमलव ३४ प्रतिशतले बढाएको छ । गत आवमा रू. २५ अर्ब २५ करोड निक्षेप सङ्कलन गरेको यस बैङ्कको चालू आवमा रू. ५२ अर्ब ३५ करोड पुर्‍याएको छ । त्यस्तै, दोस्रोमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैङ्कले गत आवको तुलनामा चालू आवमा कुल निक्षेप १ समय दशमलव ३८ प्रतिशतले बढाएर रू. ६१ अर्ब ३८ करोड पुर्‍याएको हो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको निक्षेप वृद्धिदर सो अवधिमा सबैभन्दा कम रहेको छ । यस बैङ्कको निक्षेप १ दशमलव १७ प्रतिशतमात्र बढेको भए पनि रकमको आधारमा भने यस बैङ्कले रू. १ खर्ब ४८ अर्ब कुल निक्षेप जम्मा गरेको छ । त्यस्तै गत आवमा सबैभन्दा थोरै निक्षेप सिभिल बैङ्कको रहेको छ । बैङ्कको गत असार मसान्तसम्ममा रू. ३४ अर्ब २४ करोड कुल निक्षेप थियो । बैङ्क अफ काठमाडौंको कुल निक्षेप रू. १७ करोड ५३ लाख अर्थात् शून्य दशमलव २५ प्रतिशत घटेको हो । गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ६९ अर्ब ३२ करोड रहेको यस बैङ्कको निक्षेप चालू आवको सोही अवधिमा घटेर रू. ६९ अर्ब १५ करोडमा सीमित रहेको छ ।